Aphasia uye komputa-terevhizheni. Iko kusanganiswa kwekuziva kwekudzidzira uye kudzidziswa mutauro | Kudzidziswa Kwekuziva
Takagara takataura nezve aphasia, zvese nekutsanangura muchidimbu chii icho, zvese nekugovana zvakawanda chikafu chekufunga e zvinhu zvinoshanda kune varwere uye nyanzvi. Takataurawo nezve maturusi ezvigadzirwa inoenderana nekuita kure kure. Pamusoro pekuvandudza telefoni, takataura pamusoro penyaya iyi pazviitiko zvakawandisa zvakare, semuenzaniso mune yekushandisa kwayo dehenya-uropi kukuvara.
Sezvinocherechedzwa mune mamwe mamiriro ezvinhu, shanduko mumararamiro ane hukama neCOVID-19 zvakakonzerawo shanduko munzira dzekuvandudza, kuyedza kuchinjisa yekupedzisira kune zvinodiwa zvevarwere vega. Pano, mune mamiriro ekuzviparadzanisa, tele-kugadzirisa inofunga kukosha kwakakosha. Inonyatsozvifunga iyo mune iyo aphasics, varwere avo mune dzakawanda kesi inoda kurapwa kwenguva refu uye yakasimba, zvakaoma kuisimudzira kune yekufungidzira "mangwana".
Zvakare mune iyi kesi, kutsvakurudza kwesainzi kunouya kwatiri iyo, yakapihwa mumaoko, kazhinji inokwanisa kupa zviratidzo zvakanaka kune nyanzvi nezve nzira dzakakodzera kwazvo, kuve nechokwadi chekuti iwo mhedzisiro yepamusoro inowanikwa zvichienderana nehunhu hwemurwere chaiye. Nezvenyaya iyi, ongororo yakaitwa naZhou nevamwe vavo yakaburitswa muna 2018 mavakange vari akaongorora mhedzisiro yekushandurwa kwekomputa ye aphasia, zvakare tichifananidza mhedzisiro yekudzidziswa kumwechete kwakaitwa kure tichienzanisa nepo kurapwa kumwechete kwakaitwa nachiremba aripo nyanzvi.
Ngatiendei chaizvo kunotsvaga ...
40 vanhu vane aphasia vakasarudzwa uye vakakamurwa kuita zvikamu zvina:
10 vanhu vakadaro kucheneswa komputa muchipatara;
Vanhu gumi vaimiririra boka rekudzora muchipatara (maitiro ekurapa kaviri pazuva);
10 vanhu vakadaro kucheneswa komputa casa;
Vanhu gumi vaimiririra boka rekudzora casa (kubatanidzwa mukukurukurirana kwemhuri kwemaminitsi makumi matatu pazuva).
Kuedza mhedzisiro yekudzidziswa, vese vatori vechikamu mukutsvagurudza, kusati kwapera uye mushure mekurapwa (mazuva 14 ekugadziriswazve chipatara, mazuva makumi matatu ekugadzirisa patsva) vakaongororwa kuongororwa kwemitauro pamwe nemiyedzo dzakasiyana: Western Aphasia Bhatiri (WAB) uye Inogona Kukwanisa Kugona muDhivha Yekugara Yekuedzwa (CADL).
Asi kudzoreredzwa kwaisanganisira chii?
Vaongorori vakashandisa akatevedzana emakomputa maitiro ane maringe nemitauro yemitauro asiwo asiri mutauro.
Nell 'inzvimbo yemitauro, maekisesaizi akatarisana kunzwisisa kwemuromo, nzwisiso yakanyorwa, dzokororo, sangano e kunyora (zita-chifananidzo kusangana, manhamba kupindirana, kunzwisisa mutsara, kushanda kurangarira kudzokorora, kudzokorora mutsara, kudzokororwa kwemazwi, kutumidzwa kwemazita ezita remazita nerechi, kutumidzwa nemubatanidzwa wehuwandu, kudana neshoko-mufananidzo mubatanidzwa, kunyora yemazwi nemitsara yakateererwa, kurondedzerwa kwakanyorwa kwehuwandu, kushandiswa kwezviratidzo, kubviswa kwezvinhu zvisiri-mazwi, kuvakwa kwemazwi);
Nell 'nzvimbo yekuziva (Nezvaunomuitira), kushandisa vertevano Attenzione, memory e mabasa makuru (kudzoserwa kweruzivo rwematanda, Go / No-go Exercise, Stroop mabasa, vamwe zvichibva paflanker, "switching" Exercises, attention span Exercises and works memory memory based on the n-back).
Aya maitiro emakompiyuta aishandiswa here? Paive nemusiyano wekuvashandisa mukuonekwa kwemushandi uchienzaniswa nekurovedzera kure uye mukuzvimiririra?
Nhau dzakanaka. Iyi nzira yekugadzirisa yakashanda, zvinoreva kuti kusanganisa kwemitambo inoenderana nemutauro uye "kungwara" kudzidzira kwakatungamira mukuvandudzika kwekutaura uye kugona kutaurirana kwea aphasic varwere. Kuwedzera kwekuita hakuna kuwanikwa muhuwandu hwepasi rose sengeAphasia Quotient yeWAB, asiwo muzvikamu zvakasiyana zvebhatiri rimwechete (mutauro unotaura zvoga, nzwisiso yemuromo, kudzokorora uye kutumidza mazita); pamusoro peizvozvo, sezvinoonekwa nekuvandudzwa kwehuwandu muCADL, mhedzisiro yekugadziriswazve nekombuta yakawedzeredzwa kune hwakawanda hunyanzvi hunyanzvi hwekutaurirana, kwete kungoita chete mutauro.
Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, kunyangwe zvese zvipatara uye kurapwa kuri kure kwakashanda, nzira yekutanga yaisanganisira kuwedzera kwakanaka chiratidzo. Saka kuvapo kwenyanzvi kunoramba kuchikosha kuvimbisa mhedzisiro yakakosha; mune chero mamiriro ezvinhu, kushandiswa kwezvishandiso zvemakomputa zvinoshandiswa mukufambisa-kumiririra chinomiririra chakakwaniriswa kuti chikwanise kuwedzera humwe hunyanzvi kana kuvapo kwemaitiro kweanoshanda hakugoneki, kana kuenzanisa mutengo uye mabhenefiti (kushanda pasina mubvunzo kunodzikisa mutengo we vapore).
A 'dzimwe nhau dzakanaka zviri pane ino saiti, mukati medu MutamboCenter pane zvakawanda zvemahara zvishandiso zvekushanda pane zvemitauro uye zvakavanzika zvikamu zvekutsvaga:
For the mutauro wechikamu tine chakakosha chikamu che aphasia pane isu tisingagare nekuti huwandu hweapps huripo hwakanyanya kuwanda uye tinokupa zano kuti utarise;
For the chikamu chekuziva takatsaurira mumwe chikamu chemaapps ekutarisa uye mabasa makuru. Kungotaura mienzaniso mishoma yekutsvagisa kwatichangotaura nezvayo, kune mhando dzinoverengeka dze span nemhando dzakasiyana dze N-musana (asiwo zvimwe zvimwe zvirongwa, semuenzaniso zvakatsaurirwa kumurangariro).
Aphasia, mahwendefa uye kurapa patsva: ngatitorei stock
Aphasia: zvinhu zvedu zvemahara
Zhou, Q., Lu, X., Zhang, Y., Zuva, Z., Li, J., & Zhu, Z. (2018). Telerehabilitation yakasanganiswa yekutaura-mutauro uye kugona kwekuziva kwakanyatsosimudzira kupora mune aphasia varwere. Frontiers mune zvepfungwa, 9, 2312.
aphasia, aphasia kugadzirisa, telereuctionation aphasia, komputa kudzidziswa aphasia
Computerized aphasia pamwe nekugadzirisa. Iko kusanganiswa kwekuziva kwekudzidzira uye kudzidzisa mutauro2020-04-132020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/04/teleriabilitazione-afasia-1.jpg200px200px
Aphasia: zvatiri kureva ne "kuwana mukana" uye "hukama hwakakomborerwa"
Kwekusiya simba mune dyslexia. Kuvandudza kuverenga pasina kuverengaDSA, Kuvandudza, Kurapa
Kutaura kwekurapa kwepashure-sitiroko aphasia: inobatsira here?aphasia